Fampidirana ny fisainana sy ny faniriana - The Word Foundation
Fampidirana ny fisainana sy ny faniriana
Toko I amin'ny fisainana sy fisainana
Ity fizarana voalohany ity Fisainana sy faniriana dia natao hampahafantarana anao fotsiny ny lohahevitra vitsivitsy izay resahin'ilay boky. Toa hafahafa ny maro amin'ireo lohahevitra. Ny sasany amin'izy ireo dia mety hanaitra. Mety ho hitanao fa mamporisika ny handinika azy rehetra izy rehetra. Rehefa hainao tsara ny eritreritra, ary mieritreritra ny lalanao amin'ny boky ianao, dia ho hitanao fa mihamazava hatrany izany, ary eo am-pamolavolana ny fahatakarana ny zava-misy iankinan'ny fiainana miafina ianao hatrizay - ary momba anao manokana .
Manazava ny tanjon'ny fiainana ilay boky. Izany tanjona izany dia tsy ny hahitana fahasambarana fotsiny, na eto na any aoriana. Tsy ny "famonjena" ny fanahin'ny tena koa. Ny tena tanjon'ny fiainana, ny tanjona hanome fahafaham-po ny saina sy ny saina, dia izao: ny tsirairay amintsika dia hanana fahatsiarovan-tena tsikelikely amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny fahatsiarovan-tena; izany hoe, mahatsapa ny natiora, ary ao sy mandritra ary mihoatra ny natiora. Amin'ny natiora dia midika fa izay rehetra azo ampahatsiahivina amin'ny alàlan'ny fahatsapana.
Mampahafantatra anao amin'ny tenanao koa ilay boky. Mitondra anao ny hafatra momba anao: ny fiainanao miafina izay mipetraka amin'ny vatanao. Angamba ianao efa nahalala ny tenanao tamin'ny tenanao sy ny tenanao; ary rehefa manandrana mieritreritra ny tenanao ianao dia mieritreritra ny mekanisma vatanao. Tamin'ny fahazaran-dratsy dia niresaka momba ny vatanao ho "I", toy ny "tenako" ianao. Efa mahazatra anao ny mampiasa fomba fiteny toy ny hoe "rehefa teraka aho" sy "rehefa maty aho"; ary "Nahita ny tenako tao anaty vera aho", ary "niala sasatra ny tenako", "nanapaka ny tenako aho", sns., raha ny tena izy dia ny vatanao resahinao. Mba hahalalanao hoe iza ianao dia tsy maintsy jerenao mazava tsara ny fanavahana ny tenanao sy ny vatana iainanao. Ny fampiasanao mora ny teny hoe "vatako" rehefa mampiasa ireo voalaza etsy ambony ianao dia mety tsy ho vonona tanteraka ianao hanao an'io fanavahana lehibe io.
Tokony ho fantatrao fa tsy vatanao ianao; Tokony ho fantatrao fa tsy ianao no vatanao. Tokony ho fantatrao izany satria, rehefa mieritreritra an'izany ianao, dia tsapanao fa ny vatanao dia samy hafa be amin'ny androany, tamin'ny fahatanorany, vao nahatsiaro izany ianao. Nandritra ny taona niainanao tao amin'ny vatanao dia nahatsikaritra ianao fa niova izany: rehefa niampita ny fahazazany sy ny fahatanorany ary ny fahatanorany izy dia efa niova be. Ary fantatrao fa rehefa matanjaka ny vatanao dia nisy fiovana miandalana eo amin'ny fijerinao an'izao tontolo izao sy ny fihetsikao manoloana ny fiainana. Saingy nandritra ireo fiovana ireo dia nijanona taminao ianao: izany hoe, ianao dia nahatsiaro ny tenanao ho toy ny tenany ihany, mitovy amiko, mandritra ny fotoana rehetra. Ny fisaintsainanao momba io fahamarinana tsotra io dia manery anao hahatsapa fa tsy mety ianao ary tsy mety ny vatanao; Ny vatanao dia fikambanana ara-batana izay iainanao; fomba fiasa velona izay ataonao; biby iray izay ezahanao hahatakatra, hampiofana sy hitantana.
Fantatrao ny nahatongavan'ny vatanao teto amin'izao tontolo izao; fa tsy fantatrao ny fomba nidiranao tao amin'ny vatanao. Tsy niditra tao ianao raha tsy rehefa elaela vao teraka; herintaona, angamba, na taona maro; fa io zava-misy io dia tsy fantatrao kely na tsy misy, satria ny fahatsiarovanao ny vatanao dia nanomboka taorian'ny nidiranao tao amin'ny vatanao. Fantatrao ny momba ny zavatra noforonin'ny vatanao tsy miovaova; fa tsy fantatrao izay maha-ianao anao; mbola tsy mahatsiaro tena toy ny inona ao amin'ny vatanao ianao. Fantatrao ny anarana mampiavaka ny vatanao amin'ny vatan'ny hafa; ary ity no nianaranao hihevitra ny anaranao. Ny zava-dehibe dia ny tokony hahafantaranao fa tsy hoe iza ianao amin'ny maha-izy anao, fa ny maha-izy anao manokana - mahatsiaro tena, nefa mbola tsy mahatsiaro tena toa anao, toetra tsy tapaka. Fantatrao fa velona ny vatanao, ary antenainao fa ho faty izy; satria ny zava-misy dia maty ara-potoana ny vatan'olombelona velona rehetra. Ny vatanao dia nisy fiandohana ary dia hifarana izy; ary hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia iharan'ny lalàna eto amin'izao tontolo izao ny fisehoan-javatra, ny fanovana, ny fotoana. Ianao kosa dia tsy mitovy amin'ny lalàna mifehy ny vatanao. Na dia manova ny fitaovany matetika aza ny vatanao fa tsy manova ny akanjo anaovanao azy ianao, dia tsy miova ny momba anao. Ianao dia tsy miova mihitsy.
Rehefa misaintsaina ireo fahamarinana ireo ianao dia mahita izany, na dia mety hanandrana aza ianao dia tsy afaka hieritreritra fa ianao mihitsy no ho tonga hatramin'ny farany, mihoatra noho izay azonao eritreretina fa ianao dia efa nanana hatrany am-piandohana. Izany dia satria ny maha-anao anao dia tsy manam-petra sy tsy misy farany; Ny tena izaho, ny Tenanao izay tsapanao, dia tsy mety maty sy tsy manan-kialofana, mihoatra ny hahatratrarana ny fisehoan'ny fiovana, ny fotoana, ny fahafatesana. Fa inona izany maha-fantatra ny misteranao izany, tsy fantatrao.
Rehefa manontany tena ianao hoe: "Inona no fantatro fa izaho?" ny fisian'ny maha-izy anao amin'ny farany dia hahatonga anao hamaly amin'ny fomba toy izao: "Na manao ahoana na manao ahoana aho, fantatro fa farafaharatsiny mahatsiaro tena aho; mahatsiaro farafaharatsiny mba ho tonga saina aho." Ary manohy izao zava-misy izao dia mety hiteny ianao hoe: "Noho izany dia fantatro fa misy aho. Fantatro ihany koa, izaho no izy; ary tsy olon-kafa aho. Fantatro fa izao ny mombamomba ahy izay fantatro-- ity tsy fitoviana sy tsy fitoviana tena tsapako mazava tsara ity - tsy miova mandritra ny androm-piainako, na dia misy aza ny zavatra rehetra tsapako fa toa miovaova hatrany. " Manohy izany dia mety hiteny ianao hoe: "Tsy mbola fantatro izay tsy fiovan'ny miafina ity; saingy fantatro fa amin'ity vatan'olombelona ity, izay tsapako mandritra ny ora fifohazako, dia misy zavatra mahatsiaro tena; misy zavatra mahatsapa ary maniry sy mieritreritra, fa tsy miova izany; zavatra mahatsapa izay maniry sy manery ity vatana ity hiasa, nefa mazava ho azy fa tsy ny vatana. Mazava fa ity zavatra mahatsiaro tena ity, na inona izany na inona, dia ny tenako. "
Noho izany, amin'ny fisainana, tonga ianao amin'ny fijerinao ny tenanao tsy toy ny vatana mitondra anarana sy ireo toetra hafa mampiavaka hafa, fa amin'ny maha-saina azy eo amin'ny vatana. Ny sela miaina ao amin'ny vatana dia antsoina, ao anatin'ity boky ity, ilay mpahandro-ny-vatana. Ny mpankafy-ny-vatana dia lohahevitra izay tena mahaliana ilay boky. Ho hitanao fa hanampy azy izany, rehefa mamaky ilay boky ianao, mieritreritra ny tenanao ho toy ny mpanao asa tanana; mba hijery ny tenanao ho toy ny tsy mety maty ao amin'ny vatan'olombelona. Rehefa mianatra mieritreritra ny tenanao ho toy ny mpanao asa tanana ianao, tahaka ny mpankafy eo amin'ny vatanao, dia hanao dingana lehibe ianao amin'ny fahatakarana ny misterin'ny tenanao sy ny hafa.
Fantatrao ny vatanao, ary ny zavatra hafa rehetra dia avy amin'ny natiora, amin'ny alalan'ny saina. Amin'ny alalan'ny vatanao ihany no mahatsapa fa afaka mahavita miasa ao amin'ny tontolon'ny zavaboary ianao. Manao asa ianao amin'ny fisainana. Ny eritreritrao dia mitarika anao amin'ny fahatsapanao sy ny fanirianao. Ny fahatsapanao sy ny fanirianao ary ny fisainanao dia maneho miharihary amin'ny asan'ny vatanao; Ny fikarakarana ara-batana dia ny fitenenana fotsiny, ny fanavahana, ny asa anaty ataonao. Ny vatanao miaraka amin'ny fahatsapany dia ny fitaovana, ny rafitra, izay voasarika amin'ny fahatsapanao sy ny fanirinao; Izy no masombolonao manokana.
Ny fahatsapanao dia zavamananaina velona; singa tsy hita maso momba ny natiora; ireo hery manomboka ireo izay mameno ny firafitry ny vatanao iray manontolo; izy ireo dia orinasa izay, na dia tsy mahay aza, dia mahatsiaro tena ho asany. Ny fahatsapanao no ivon-toerana, mpampita hafatra eo amin'ny zavatra voajanahary sy ny masinin'olombelona izay iasanao. Ny maso no ambasadaoron'ny natiora anao. Ny vatanao sy ny fahatsapany dia tsy manan-kery miasa an-tsitrapo; tsy mihoatra ny fonon-tànanao izay ahafahanao mahatsapa sy manao zavatra. Fa kosa, io hery io dia ianao, ilay mpandraharaha, ny tena mahatsiaro tena, ilay mpanao vatana.
Raha tsy misy anao, ny mpanao, tsy afaka mahavita na inona na inona ny masinina. Ny hetsika an-tsitrapo ataon'ny vatanao - ny asan'ny fananganana, ny fikojakojana, ny fanamboarana ny sela ary ny sisa - dia mandeha ho azy avy amin'ny milina miaina tsirairay rehefa miasa izy io ary miaraka amin'ny masinina fanovana voajanahary. Ity asan'ny natiora mahazatra ao amin'ny vatanao ity dia iharan'ny fanelingelenana tsy tapaka, na izany aza, amin'ny fisainanao tsy voalanjalanja sy tsy ara-dalàna: ny asa dia simbaina ary nanjary tsy misy dikany noho ny fihenjanan'ny vatana sy ny tsy fandanjalanjana amin'ny alàlan'ny famelana ny fihetseham-ponao sy ny fanirianao hiasa tsy misy anao fifehezana ny saina. Noho izany, mba hahafahan'ny natiora hamerina ny masininao tsy misy fanelingelenana ny eritreritrao sy ny fihetsem-ponao, dia omena anao ny famelana azy tsindraindray; ny natiora ao amin'ny vatanao dia manome fa ny fatorana mitazona anao sy ny fahatsapana miaraka dia milamina indraindray, amin'ny ampahany na tanteraka. Matory ity fitsaharana na famotsorana ny fahatsapana ity.
Raha matory ny vatanao dia tsy mifandray amin'izany ianao; amin'ny lafiny iray dia lavitra azy ianao. Saingy isaky ny manaitra ny vatanao ianao dia mahatsapa avy hatrany fa ilay "I" mitovy amin'ilay anao talohan'ny namelanao ny vatanao natory. Ny vatanao, na mifoha na matory, dia tsy mahatsapa na inona na inona mandrakizay. Izay mahatsiaro tena, izay mieritreritra, dia ny tenanao, ilay mpanao ao amin'ny vatanao. Miharihary izany rehefa mieritreritra ianao fa tsy mieritreritra rehefa matory ny vatanao; farafaharatsiny, raha mieritreritra ianao mandritra ny fotoana fatoriana tsy fantatrao na tsy tadidinao, rehefa manaitra ny fahatsapana ny vatanao ianao, izay noeritreretinao.
Ny torimaso dia lalina na manonofy. Ny torimaso lalina dia ny toe-piainanao misintona ao aminao, ary tsy ahafahanao mahazo ny saina; io no fanjakana nijanona tsy niasa ny fahatsapana vokatry ny fihatahana tamin'ny hery niasan'izy ireo, fahefana iza no nataonao. Ny nofy dia ny fiparitahan'ny ampahany; ny fanjakana izay ahodin'ny sainao ny zavatra ivelany voajanahary mba hiasa ao anaty voajanahary, mihetsika mifandraika amin'ny lohahevitr'ireo zavatra izay tsapa mandritra ny fifohazana. Rehefa, aorian'ny fotoana fatoriana lalina, miditra ao amin'ny vatanao ianao dia manaitra avy hatrany ny fahatsapana ary manomboka miverina amin'ny alalàn'izy ireo indray ho mpandrindra marani-tsaina amin'ny masininao, mieritreritra, miteny ary manao zavatra toy ny fahatsapana-sy- faniriana izay misy anao. Ary amin'ny fahazarana mandritra ny androm-piainana dia fantatrao avy hatrany ny tenanao sy ny vatanao: "Natory aho," hoy ianao; "efa mifoha aho izao."
Fa ao amin'ny vatanao sy ivelan'ny vatanao, mifoha mifoha sy matory isan'andro; amin'ny alàlan'ny fiainana sy amin'ny fahafatesana, ary amin'ny alàlan'ny fanjakana aorian'ny fahafatesana; ary manomboka amin'ny fiainana ka hatramin'ny fiainana amin'ny androm-piainanao rehetra - maharitra hatrany ny maha-izy anao sy ny fahatsapanao ny maha-izy anao. Ny maha-ianao anao dia zavatra tena misy, ary fanatrehana miaraka aminao mandrakariva; saingy zava-miafina izay tsy takatry ny sain'ny olona izany. Na dia tsy afaka ny ho voasambotry ny fahatsapana aza ianao dia mahatsapa ny fisian'izany. Mahatsapa izany ho toy ny fahatsapana ianao; manana fahatsapana ny maha-izy anao ianao; fahatsapana I-ness, fitiavan-tena; mahatsapa ianao, tsy misy fanontaniana na manamarina fa olona miavaka mitovy ianao izay maharitra mandritra ny fiainana.
Izany fahatsapana ny fisiana ny maha-ianao anao izany dia tena voafaritra tsara ka tsy afaka hieritreritra fa ny tenanao ao amin'ny vatanao dia mety ho hafa noho ny tenanao; Fantatrao fa mitovy foana aminao foana ny tenanao, ny tenanao ihany, ny iray ihany. Rehefa mametraka ny vatanao hiala sasatra sy hatory ianao dia tsy afaka ny hieritreritra fa ho tapitra ny mombamomba anao rehefa aokafanao ny vatanao ary alefaso; Manantena tanteraka ianao fa rehefa mahatsiaro tena ao amin'ny vatanao ianao ary manomboka andro iray amin'ny asa atao ao amin'izany, dia mbola hitovy amin'ny anao ihany, ilay izy ihany, ilay mpankany.
Toy ny torimaso, toy izany koa amin'ny fahafatesana. Ny fahafatesana ihany no matory, fotoana fisotroan-dronono mivezivezy ivelan'izao tontolo izao. Raha amin'ny fotoana hahafatesanao no ahatsapanao ny fihetseham-ponao, amin'ny fitiavan-tena, dia ho tsapanao ihany koa fa ny torimaso fahafatesana dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fitohizan'ny maha-izy anao raha oharina amin'ny alahelonao amin'ny alina . Ho tsapanao fa amin'ny alalan'ilay hoavy tsy fantatra no hitohy ianao, na dia mbola mitohy isan'andro isan'andro ianao amin'ny alalan'ny fiafaran'izao fiainana izao. Ity tenanao ity, ity, izay fantatrao mandritra ny fiainanao amin'izao fotoana izao, dia ny tenanao ihany, mitovy aminao ihany, izay nahatsikaritra ihany koa ny mitohy isan'andro isan'andro amin'ny fiainanao taloha.
Na dia zava-miafina ho anao aza ny fiainanao taloha, ny fiainanao taloha teto an-tany dia tsy mahagaga mihoatra noho ny fiainana ankehitriny. Isaky ny maraina dia misy ny mistery hiverina any amin'ny vatanao miala sasatra aminao-tsy-fantatra-izay, miditra ao aminao amin'ny fomba-manao-tsy-mahalà-ny, ary mahatsapa indray izao tontolo izao nahaterahana sy fahafatesana sy ny fotoana. Saingy efa nitranga matetika izany, efa ela loatra no voajanahary, ka toa tsy mistery izany; Izany dia fisehoan-javatra mahazatra. Na izany aza, dia tsy misy fahasamihafana amin'ny fomba fandehananao, rehefa manomboka ny fisian'ny fialana aina, dia miditra amin'ny vatana vaovao izay noforonina ho anao noho ny natiora, nampiofana sy novokarin'ny ray aman-dreninao na ny mpiambina anao ho toy ny vaovao Toeram-ponenana manerantany, manga vaovao ho toetra.
Ny toetra maha-olona dia ny persona, ny sarimihetsika, amin'ny alalan'ilay mpilalao, ilay mpankafy. Noho izany, mihoatra noho ny vatany izany. Mba hahatonga ny toetra maha-olona ny vatan'olombelona dia tokony hatsangana amin'ny fisian'ilay mpitrosa eo aminy. Ao anatin'ilay tantara manova ny fiainana mandrakariva ny mpankafy ary mitafy toetra iray, ary amin'ny alalany dia mihetsika sy miresaka rehefa manao ny anjarany. Amin'ny maha-toetra azy, ny mpankahala dia mihevitra ny tenany ho toy ny toetrany; Izany hoe, ny masquerader dia mieritreritra ny tenany fa ny ampahany izay ataony, ary manadino ny tenany fa ny tena tsy mety maty ao amin'ny saron-tava.
Ilaina ny mahatakatra ny momba ny fiainana indray sy ny lahatra, raha tsy izany dia tsy azo atao ny manisa ny fahasamihafana eo amin'ny natiora sy ny toetran'ny olombelona. Ny fanamafisana fa ny tsy fitovian'ny fahaterahana sy ny toerana misy, ny harena sy ny fahantrana, ny fahasalamana sy ny aretina, vokatry ny lozam-pifamoivoizana na ny kisendrasendra dia manimba ny lalàna sy ny fahamarinana. Ankoatr'izay, hanomezana fahendrena, fahaiza-manao, famoronana, fanomezana, fahaiza-manao, fahefana, hatsaran-toetra; na, ny tsy fahalalana, ny tsy fahaizan-tena, ny fahalemena, ny hakamoana, ny ratsy ary ny fahalehibeazana na fahakelezan'ny toetra amam-panahy amin'ireny, satria avy amin'ny lova ara-batana, dia manohitra ny fahaiza-misaina sy ny antony. Ny lova dia misy ifandraisany amin'ny vatana; fa ny toetra no mahatonga ny fisainana. Ny lalàna sy ny fahamarinana no mibaiko ity tontolo nahaterahana sy maty ity, raha tsy izany dia tsy afaka nitohy tamin'ny làlam-piainany; ary ny lalàna sy ny fahamarinana dia manjaka amin'ny raharahan'olombelona. Fa ny vokany dia tsy manaraka avy hatrany antony. Ny famafazana dia tsy manaraka avy eo ny fijinjana. Toy izany koa, ny vokatry ny fihetsika na eritreritra dia mety tsy hiseho raha tsy aorian'ny fotoana lava be miditra. Tsy azontsika jerena izay mitranga eo anelanelan'ny eritreritra sy ny fihetsika ary ny vokatr'izany, mihoatra ny fahitantsika ny zava-mitranga eo amin'ny tany eo anelanelan'ny fotoanan'ny voa sy ny fijinjana; fa ny tena ao amin'ny vatan'olombelona dia manao ny lalàny ho lahatra amin'ny zavatra heveriny sy izay ataony, na dia mety tsy ho fantany aza rehefa manoratra ny lalàna izy; ary tsy fantany hoe rahoviana vao ho fenoina ilay takelaka, amin'ny maha-lahatra azy, amin'ny fiainana ankehitriny na amin'ny ho avy eto an-tany.
Iray andro sy androm-piainana dia mitovy ihany; vanim-potoana miverimberina misy fiainana maharitra izy ireo anaovan'izay manao ny anjarany sy mampifandanja ny kaonty olombelona amin'ny fiainana. Ny alina sy ny maty koa dia mitovy ihany: rehefa mihataka ianao hamela ny vatanao hiala sasatra sy hatory, dia mandalo traikefa iray nitovy tamin'ny zavatra nolalovanao ianao rehefa nandao ny vatana rehefa maty. Ny nofinao amin'ny alina, koa, dia ampitahaina amin'ny fanjakana aorian'ny fahafatesanao izay andalovanao matetika: ny roa dia dingana amin'ny hetsika ataon'ny mpanao azy; amin'ny roa ianao dia miaina ny eritreritrao sy ny fihetsikao mifoha, ny fahatsapana anao dia mbola miasa voajanahary, fa amin'ny toetr'andro voajanahary. Ary ny vanim-potoanan'ny torimaso lalina amin'ny alina, rehefa tsy miasa intsony ny saina - ny toetoetran'ny fanadinoana izay tsy misy fahatsiarovana na inona na inona - dia mifanaraka amin'ny vanim-potoana banga izay andrasanao eo amin'ny tokonam-panahin'ny tontolo ara-batana mandra-pahatongan'ny fotoana anaovanao izany. mifandray indray amin'ny fahatsapanao amin'ny vatana nofo vaovao: ny vatan'ny zaza na ny vatan'ny zaza izay namboarina ho anao.
Rehefa manomboka fiainam-baovao ianao dia mahatsiaro tena, toy ny amin'ny orana. Mahatsapa ianao fa zavatra miavaka sy voafaritra. Ny fahatsapako ny fahamendrehako na ny fitiavan-tena dia ny hany zavatra tena ahafantaranao ny fotoana lehibe. Ny zava-drehetra dia mystery. Mandritra ny fotoana ianao dia sahiran-tsaina, eny fa na dia ory aza, noho ny vatanao vaovao vaovao sy ny tontolo tsy mahazatra. Saingy rehefa mianatra ny fomba ampiasanao ny vatanao ianao ary mampiasa ny sainy dia mizotra tsikelikely ianao mba hamantarana ny tenanao miaraka aminy. Ankoatr'izay, dia nofaritan'ny olona hafa ianao mba hahatsapa fa ny vatanao no anao; Ho tsapanao fa ianao no vatana.
Araka izany, rehefa mihamaro hatrany ianao eo ambany fanaraha-maso ny fihetseham-pon'ny vatana, dia lasa tsy dia mieritreritra loatra ianao fa zavatra tsy mitovy amin'ny vatanao izay misy anao. Ary rehefa mitombo ny fahazazanao dia ho very ny hafetsena amin'ny zava-drehetra izay tsy azo tsapain-tanana amin'ny saina, na mieritreritra amin'ny heviny; ianao dia hogadraina ara-tsaina ao amin'ny tontolon'ny zavaboahary, tsy hahatsiaro afa-tsy ny trangan-javatra, ny tsy firaharahiana. Amin'ireny fepetra ireny dia tsy maintsy ho zava-miafina mandritra ny androm-piainana ianao.
Tsiambaratelo lehibe kokoa ny tena Tenanao - izany Tenanao lehibe izay tsy ao amin'ny vatanao izany; tsy ato amin'ity tontolo nahaterahana sy maty ity; fa izay, tsy mety maty tsy mety maty ao amin'ny tontolon'ny maharitra maharitra, dia fanatrehana miaraka aminao mandritra ny androm-piainanao rehetra, amin'ny alàlan'ny torimaso sy ny fahafatesanao rehetra.
Ny fikarohan'ny olona mandritra ny androm-piainany zavatra iray izay hahafa-po dia tena fikatsahana ny tena tena izy; ny maha-izy azy, ny fizakan-tena ary ny I-ness, izay tsy takatry ny saina tsirairay avy, ary mahatsapa sy maniry hahalala. Ka noho izany ny tena tena izy dia hofaritana ho fahalalana-tena, tanjona tena izy na dia tsy eken'ny fikarohan'ny olombelona aza. Ny faharetana, ny fahalavorariana, ny fahatanterahana izay tadiavina nefa tsy hita velively amin'ny fifandraisana sy ezaka ataon'ny olombelona. Ankoatr'izay, ny tena Izy no mpanolo-tsaina sy mpitsara mandrakariva izay miteny ao am-pony ho fieritreretana sy adidy, fahamarinana sy fahaiza-misaina, lalàna sy fahamarinana - raha tsy izany dia ho biby fotsiny ny olona.
Misy ny tena toy izany. Izany dia avy amin'ny Triune Self, ao amin'ity boky ity antsoina hoe satria antokon'olona iray tsy azo isehoan'ny trinite iray isam-batan'olona: ny ampahany amin'ny knower, ny tapany fisainana, ary ny ampahany anjara. Ny ampahan'ny anjaran'olona ihany no afaka miditra ao amin'ny vatana ary manao izany olona izany. Ity ampahany namboarina ity dia ny antsoina hoe doer-in-the-body. Ao amin'ny olombelona tsirairay ny mpankafy miasa dia ampahany tsy azo sarona amin'ny an'ny Triune Self, izay singa miavaka amin'ny Triune Selves. Ny ampahany amin'ny tanjon'ireo Triune Self dia ao amin'ny mandrakizay, ny sehatry ny faharetana, izay mampivelatra an'izao tontolontsika izao amin'ny fahaterahana sy ny fahafatesana ary ny fotoana. Ny mpankahala ny vatany dia tarihin'ny eritreritra sy ny vatana; Noho izany, tsy afaka mahatsapa ny zava-misy iainan'ny mpandinika sy ny ampahany amin'ny endriky ny Triune Self. Tsy mahomby izany; ny mason'ny sainy mahatsiaro izany, ny fihodinan'ny nofo mihazona izany. Tsy mahita ny tanjona mazava izy; matahotra ny hanafaka ny tenany amin'ny kôpily nofo ary mijoro irery. Rehefa manaporofo ny fahavononany sy ny fahavononany hamongotra ny fahatsapana ho diso fanantenana ny mpikaroka, ny mpandinika sy ny mpampiasa azy dia vonona foana hanome azy fahazavana eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahalalan'ny tena. Saingy ny mpikaroka miasa mitady ny mpandinika sy ny knee dia mijery any ivelany. Ny famantarana, na ny tena tena, dia efa mistery foana amin'ny fisainan'ny olona amin'ny sivilizasiona tsirairay.
Plato, angamba ilay malaza indrindra sy solontenan'ny filozofa any Gresy, nampiasaina ho toy ny fitsipika ho an'ny mpanaraka azy ao amin'ny sekolin'ny filozofia, ny Akademia: "Fantaro ny tenanao" - gnothi seauton. Hita tao amin'ny asa sorany fa nanana ny fahalalany ny tena Izy izy, na dia tsy nisy na dia iray aza ny teny nampiasainy nadika amin'ny teny anglisy ho zavatra mety kokoa noho ny "fanahy". Plato dia nampiasa fomba famotopotorana momba ny fikarohana ny tena tena izy. Misy zavakanto lehibe amin'ny fitrandrahana ny toetrany; amin'ny famokarana ny vokany mahatalanjona. Tsotra sy lalina ny fomba fampiasany dialectika. Ilay mpamaky kamo ara-tsaina, izay aleony miala voly toy izay mianatra, dia azo inoana fa hieritreritra Plato mandreraka. Mazava ho azy fa ny fomba fiteniny dia ny hampiofana ny saina, ho afaka hanaraka fomba fisainana ary tsy hanadino ireo fanontaniana sy valiny amin'ny fifampiresahana; raha tsy izany dia tsy ho afaka hitsara ny fehin-kevitra notsoahina tao amin'ny tohan-kevitra. Azo antoka fa tsy nikasa ny hanolotra fahalalana ho an'ny mpianatra i Platon. Azo inoana kokoa fa nikasa ny hifehezana ny saina amin'ny fisainana izy mba hahatonga ny fisainan'ny olona iray hohazavaina ary hitarika amin'ny fahalalana ny momba azy. Ity, ny fomba Socratic, dia rafitra dialectika misy fanontaniana sy valiny manan-tsaina izay raha arahana dia tena hanampy olona hianatra hieritreritra; ary amin'ny fampiofanana ny saina hieritreritra tsara Plato dia nanao mihoatra noho ny mpampianatra hafa rehetra. Saingy tsy nisy soratra tonga teto amintsika izay nilazany hoe inona ny fisainana, na inona ny saina; na inona ny tena Tenany, na ny làlan'ny fahalalana izany. Tsy maintsy mijery lavitra ny olona iray.
Ny fampianarana taloha any India dia fintinina amin'ny fanambarana tsy misy dikany: "that you're thou" (tat tvam asi). Ny fampianarana anefa tsy manazava mazava ny atao hoe "izay" na "ilay"; na amin'ny fomba ahoana no ifandraisan'ny "izay" sy ny "anao", na ny fomba hahitana azy ireo. Nefa raha misy dikany ireo teny ireo dia tokony hohazavaina amin'ny teny azo takarina. Ny votoatin'ny filozofia indiana rehetra - raha hijery fomba ankapobeny ny sekolim-pianakaviana dia toa ny tsy fahita amin'ny olombelona dia zavatra iray izay anisan'ny singa mitambatra na manerantany, toy ny mitete hatrany ny rano an-dranomasina dia ampahan'ny ranomasina, na toy ny spark dia iray miaraka amin'ny lelafo izay niandohany sy nisy azy; ary, ankoatr'izay, ity zavatra tokana ity, ity ilay mpanao maoderina - na, izay antsoina amin'ny sekoly ambaratonga voalohany, ny atman, na ny purusha, - dia misaraka amin'ny zavatra manerantany amin'ny alàlan'ny fisalobonana fotsiny. , izay mahatonga ny mpanao ao amin'ny olombelona hihevitra ny tenany ho misaraka sy amin'ny maha-olona azy; Fa kosa, nanambara ireo mpampianatra fa tsy misy ny maha-izy azy manokana ankoatry ny zavatra lehibe manerantany, antsoina hoe Brahman.
Ny fampianarana dia, ankoatr'izay, fa ny sombintsombiny hita ao amin'ny Brahman manerantany dia iharan'ny fisian'ny olombelona sy ny fijaliana sendra azy, tsy mahatsiaro tena ho iza izy ireo amin'ny Brahman manerantany; mifamatotra amin'ny kodiaran'ny fahaterahana sy ny fahafatesana ary ny famerenana endrika voajanahary, mandra-pahatongan'ny fahanterana lava, ny sombintsombiny rehetra dia natambatra indray tao amin'ny Brahman manerantany. Ny antony na ny filàna na ny faniriana ny hamakian'i Brahman ity fomba sarotra sy maharary ity satria ny sombintsombiny na ny nilatsaka dia tsy nohazavaina. Tsy aseho koa ny maha Brahman manerantany tonga lafatra na azo andraisan-tsoa azy; na ahoana no ahazoana tombony amin'ny sombintsombiny; na ny fomba ahazoana tombony ny natiora. Ny fiainana maha-olombelona iray manontolo dia toa fanandramana tsy misy ilana azy tsy misy antony na antony.
Na eo aza izany, ny fomba iray dia asehon'ny olona iray mahafeno fepetra araka ny tokony ho izy, mitady "fitokana-monina", na "fanafahana" amin'ny fanandevozana ara-tsaina ankehitriny ho an'ny natiora, amin'ny alàlan'ny ezaka feno herim-po hisintaka ny beso, na ny fiheverana voajanahary, ary handeha eo alohan'ny fitsoahana ankapobeny amin'ny natiora. Ny fahalalahana dia tokony hahazoana, hoy, amin'ny fampiharana ny yoga; satria amin'ny alàlan'ny yoga, hono, ny fisainana dia mety hifehezana fatratra ka ny atman, ny purusha - ilay mpanao nohajaina - dia mianatra mamehy na manimba ny fihetsem-po sy ny faniriany ary manaparitaka ireo tsikombakomban'ny fahatsapana izay efa voafandriky ny eritreriny. ; noho izany dia nafahana tamin'ny filan'ny fisian'ny olombelona bebe kokoa, dia naverina niditra tao amin'ny Brahman manerantany.
Ao anatin'izany rehetra izany dia misy ny mariky ny fahamarinana, ary noho izany misy soa be dia be. Ny yogi dia mianatra mifehy ny vatany tokoa ary mifehy ny fihetseham-pony sy ny faniriany. Azony atao ny mianatra mifehy ny sainy amin'ny fotoana ahafahany, araka ny itiavany azy, hahatsapa ny toe-javatra ao anatiny ho an'ireo izay tsapan'ny olona tsy zatra fieritreretana, ary amin'izany dia ho afaka hitrandraka sy hahafantatra ireo fanjakana voajanahary izay zava-miafina amin'ny ankamaroan'ny olombelona. Azony atao ihany koa ny mahazo mari-pahaizana ambony amin'ny herin'ny natiora sasany. Ireo rehetra ireo dia tsy isalasalana fa mampiavaka ny tsirairay amin'ny olona marobe tsy mahay mifehy. Fa na dia ny rafitry ny yoga aza dia mihevitra ny "hanafaka" na "mitoka-monina", ilay olona voahaja tamin'ny hetahetan'ny fahatsapana, dia toa mazava fa tsy nitondra olona mihoatra ny fetin'ny natiora mihitsy izy io. Mazava izany fa vokatry ny tsy fahazoan-kevitra momba ny saina.
Ny saina izay ampiofanina amin'ny yoga dia ny saina-saina, ny saina. Izany fitaovana manokana amin'ny mpikaroka izay voalaza ao amin'ny pejy taty aoriana toy ny vatan'ny saina, eto dia miseho amin'ny toe-tsaina roa hafa izay mbola tsy niavaka: saina noho ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpikarakara. Ny vatana dia ny hany fomba ahafahan'ny mpikaroka miasa amin'ny alalan'ny eritreritra. Ny fikojakojana ny vatana dia voafetra tanteraka amin'ny fahatsapana, ary avy hatrany ny natiora. Amin'ny alalan'iny, ny olombelona dia mahatsiaro an'izao tontolo izao ao amin'ny sehatra mampiavaka azy: ny tontolo amin'ny fotoana, ny tantara an-tsary. Noho izany, na dia mampitombo ny fahiratan-tsainy aza ilay mpianatra, dia hita koa fa mbola miankina amin'ny fisainany izy, mbola mifamahofaho amin'ny natiora, fa tsy manafaka amin'ny ilàna ny fisian'ny fisainana mitohy ao amin'ny vatan'olombelona. Raha fintinina, na dia mety ho mpankafy aza ny mpandraharaha amin'ny vatany, tsy afaka mitoka-monina na manala ny tenany amin'ny natiora izy, tsy afaka mahazo fahalalana momba azy na amin'ny tena maha-izy azy, amin'ny fisainana amin'ny saina fotsiny; Ny loha-hevitra toy izany dia mistery foana amin'ny saina, ary tsy azo takarina afa-tsy amin'ny alalan'ny fandefasana tsara ny saina amin'ny saina amin'ny saina sy ny faniriana.
Toa tsy noheverina ho ao anaty rafitra fisainana Atsinanana ny sain'ny fahatsapana sy ny faniriana. Ny porofon'izany dia hita ao amin'ny boky efatra an'ny Patanjali's Yoga Aphorism, ary ao amin'ireo fanehoan-kevitra isan-karazany momba an'io asa taloha io. Patanjali angamba no olona hajaina indrindra sy solontenan'ny filozofa India. Lalina ny asa sorany. Nefa toa azo inoana fa very na nafenina miafina ny tena fampianarany; fa ireo sotera saro-pady izay mitondra ny anarany dia toa manelingelina na manatanteraka ny tanjona kendrena hatao. Ny fomba ahafahan'ny paradisa toy izany manohy tsy azo iadian-kevitra mandritra ny taonjato maro dia tsy maintsy hazavaina raha tsy amin'ny hazavain'ny zavatra voalaza ato amin'ity toko sy manaraka ity momba ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny olombelona.
Ny fampianarana atsinanana, toy ny filozofia hafa, dia mifandraika amin'ny misterin'ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny vatan'olombelona, ​​sy ny tsiambaratelon'ny fifandraisana misy eo amin'ny tenany sy ny vatany ary ny natiora ary izao rehetra izao manontolo. Saingy ny mpampianatra indiana dia tsy mampiseho fa fantany ny atao hoe ny tena-mahatsiaro tena - ny atman, ny purusha, ny mpanao embodied - izay tsy mitovy amin'ny natiora: tsy misy fanavahana mazava tsara eo amin'ny mpanatontosa sy ny ny vatana izay voajanahary. Ny tsy fahitana na fanasongadinana io fanavahana io dia miharihary noho ny fiheveran-diso eran'izao tontolo izao na ny tsy fahazoana ny fahatsapana sy ny faniriana. Ilaina ny manazava ny fahatsapana sy ny faniriana amin'izao fotoana izao.
Ny fiheverana ny fahatsapana sy ny faniriana dia manolotra ny iray amin'ireo lohahevitra tena manan-danja sy mahatratra indrindra ao amin'ity boky ity. Ny dikany sy ny lanjany dia tsy azo ovaina loatra. Ny fahatakarana sy ny fampiasana ny fahatsapana sy ny faniriana dia mety midika ho fiheverana ny fivoaran'ny olona sy ny maha-olombelona; Afaka manafaka ireo mpikomy amin'ny eritreri-diso, ny finoana diso, ny tanjona sandoka, izay nitahirizan'izy ireo tao anaty haizina. Manohitohina ny fivavahan-diso izay efa nekena hatry ny ela; Ny finoana izay miorim-paka lalina tokoa amin'ny fisainan'ny olombelona dia toa tsy misy mieritreritra ny hanontany azy.
Ity dia izao: nampianarina ny rehetra hino fa ny fahatsapana ny vatana dia dimy isa, ary izany fahatsapana izany dia iray amin'ireo fahatsapana. Ny fahatsapana, araka ny voalaza ato amin'ity boky ity, dia singa voajanahary, zava-manan'aina, mahatsiaro tena ho toy ny asany nefa tsy mahay. Efatra fotsiny ny saina: fahitana, fandrenesana, tsiro ary fofona; ary ho an'ny fahatsapana tsirairay dia misy taova manokana; saingy tsy misy taova manokana ho an'ny fahatsapana satria ny fahatsapana - na dia tsapa amin'ny alàlan'ny vatana aza - dia tsy an'ny vatana, tsy an'ny natiora. Izy io dia iray amin'ireo lafiny roa ananan'ny mpanao. Ny biby dia manana fahatsapana sy faniriana ihany koa, fa ny biby dia fanovana avy amin'ny olombelona, ​​araka ny nohazavaina taty aoriana.
Toy izany koa ny faniriana, ny lafiny iray hafa amin'ilay mpankafy. Ny fahatsapana sy ny faniriana dia tsy maintsy miara-midinika foana, satria tsy azo sarahina izy ireo; ary tsy misy hafa raha tsy misy; Izy ireo dia toy ny bao roa amin'ny elatry ny herinaratra, ny lafiny roa amin'ny vola madinika. Noho izany ity boky ity dia mampiasa ny teny mitambatra: fahatsapana sy faniriana.
Ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpankato dia ny hery manan-tsaina izay mihetsiketsika ny natiora sy ny saina. Ao anatin'ny hery famoronana izay manerana an'izao tontolo izao; raha tsy mitsahatra ny fiainana rehetra. Ny fahatsapana sy ny faniriana dia ny zavakanto fanokanana tsy manam-petra sy tsy misy fiafarana izay ahitan'ny zava-drehetra ny fahatsapana, ny fisainana, ny famolavolana, ny fitondrana ary ny fanaraha-maso, na amin'ny alalan'ny masoizan'ny mpankafy amin'ny olona na ny an'ny Governemanta amin'izao tontolo izao, na amin'ny Intelligences lehibe. Ny fihetseham-po sy ny faniriana dia ao anatin'ny asa aman-draharaha manan-tsaina rehetra.
Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny fahatsapana-sy-faniriana no hery mahatsapa izay miasa amin'ity milina natiora tsirairay ity. Tsy iray amin'ireo fahatsapana efatra - mahatsapa. Ny fahatsapana, ny endrika mazoto an'ny mpanao azy, dia ny ao amin'ny vatana izay mahatsapa, izay mahatsapa ny vatana ary mahatsapa ny fientanam-po izay ampitain'ny fahatsapana efatra ho an'ny vatana, toy ny fahatsapana. Ankoatr'izay, izy io dia afaka mahita marimaritra iraisana amin'ny fomba isan-karazany, toy ny toe-tsaina, ny rivotra iainana, ny filoham-pirenena; afaka mahatsapa ny tsara sy ny ratsy izy io, ary afaka mahatsapa ny fampitandreman'ny feon'ny fieritreretana. Ny faniriana, ny endrika mihetsika, dia ny hery mahatsiaro tena izay mampihetsika ny vatana amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny mpanao azy. Ny mpanao dia miasa miaraka amin'ny lafiny roa: koa ny faniriana rehetra dia mipoitra avy amin'ny fahatsapana, ary ny fahatsapana rehetra dia miteraka faniriana.
Hanao dingana manan-danja eo amin'ny làlana hahafantarana ny fahatsapan'ny tena ao amin'ny vatana ianao rehefa mieritreritra ny tenanao ho toy ny fihetseham-po tsapanao amin'ny alàlan'ny rafitra an-tsitrapo, toy ny fahasamihafana amin'ny vatana izay tsapanao, ary eo am-panaovana azy ny faniriana manidintsidina ny ranao, fa tsy ny ra. Ny fahatsapana sy ny faniriana dia tokony hampiavaka ny fahatsapana efatra. Ny fahatakarana ny toerana sy ny asan'ny fahatsapana sy ny faniriana dia ny fialana amin'ny finoana izay nahatonga ireo mpankafy amin'ny olombelona ho an'ny olona maro ho toy ny maty. Amin'ny alalan'ity fahatakarana momba ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny olombelona ity, ny filôzôfia ao India dia mety hanohy ny fankasitrahana vaovao.
Ny fampianarana atsinanana dia manaiky fa raha te hahalala ny tena ao am-batana ny olona dia tsy maintsy afahana amin'ny eritreritry ny saina ary amin'ny eritreritra diso sy fihetsika vokatry ny tsy fifehezana ny fihetseham-po sy ny filan'ny tena. . Saingy tsy mihoatra ny eritreritra diso manerantany fa ny fahatsapana dia iray amin'ireo fahatsapana ny vatana. Mifanohitra amin'izany no nilazan'ny mpampianatra fa fahatsapana fahadimy ny mikasika na ny fahatsapana; izany faniriana izany dia an'ny tena koa; ary ny fahatsapana sy ny faniriana dia zavatra voajanahary amin'ny vatana. Araka io fomban-kevitra io, dia iadian-kevitra fa ny purusha, na atman - ilay mpanao ny endriny, ny fahatsapana-sy-faniriana - dia tsy maintsy mamono tanteraka ny fahatsapana ary tokony handrava tanteraka, ny "famonoana", ny faniriana.
Raha jerena ny zavatra naseho eto momba ny fahatsapana sy ny faniriana, dia toa manoro hevitra ny tsy fahafahana ny fampianarana ny Atsinanana. Ny sela tsy mety maty ao amin'ny vatana dia tsy afaka manimba ny tenany. Raha azo atao ny miala amin'ny fihetseham-po sy ny faniriana ny vatan'ny olombelona, ​​dia ny vatana ihany no ho mendri-pihetseham-po fotsiny.
Ankoatry ny tsy fahazoan'izy ireo ny fahatsapana-sy-faniriana dia tsy manome porofo ny mpampianatra Indiana manana fahalalana na fahatakarana ny momba ny Triune Self. Ao amin'ilay fanambarana tsy misy fanazavana: "ianao izany," dia tsy maintsy tsoahina fa ny "ianao" izay resahina dia ny atman, ny purusha - ilay olona maneho tena; ary ny "an'io" izay amaritana ny "anao" dia ilay tena manerantany, Brahman. Tsy misy fanavahana natao teo amin'ilay nanao sy ny vatany; ary toy izany koa misy tsy fahombiazana mifanaraka amin'ny fanavahana ny Brahman manerantany sy ny natiora manerantany. Amin'ny alàlan'ny fotopampianaran'ny Brahman manerantany ho loharano sy fiafaran'ny olona voatanisa tsirairay, mpanao an-tapitrisany maro no voatazona ho tsy fahalalana ny tena tenan'izy ireo; Ary ankoatr'izay, antenaina, na dia ny faniriana aza, ny hahavery ao amin'ny Brahman manerantany izay zavatra sarobidy indrindra azon'ny olona rehetra atao: ny tena maha izy azy, ny tena manokana an'ny tena manokana, ankoatry ny Olona tsy mety maty hafa.
Na dia mazava aza fa ny filozofia tatsinanana dia mitazona ny mpankahala mifandray amin'ny natiora, ary amin'ny tsy firaharahiana ny tena tena izy, dia toa tsy azo eritreretina izany ary tsy azo inoana fa ny lesona dia mety noforonina tao anatin'ny tsy fahalalana; mba hahafahan'izy ireo ho tafajanona amin'ny fikasana ny hitazona ny olona hiala amin'ny fahamarinana, ary koa amin'ny fanekena. Tena azo inoana fa ny endriny efa misy, na dia efa antitra aza izy ireo, dia ny sisa tavela amin'ny rafitra efa zokinjokiny izay nanjavona avy amin'ny sivilizasiona dia nanjavona ary saika hadino: fampianarana izay mety ho tena manazava; Izany fahatsapana sy faniriana izany ho toy ny tsy mpangalatra tsy mety maty; izay nampiseho ny mpankahala ny fomba hahafantarana ny tenany tena tena. Ny singa ankapobeny amin'ny endrika efa misy dia manome soso-kevitra toy izany; ary nandritra ny vanim-potoana dia ny fampianarana tany am-piandohana dia tsy nahazatra ny fampianarana momba ny Brahman manerana izao tontolo izao sy ireo fotopampianarana paradoxika izay hanafoana ny fahatsapana sy ny faniriana tsy mety maty ho toy ny zavatra tsy mety.
Misy harena tsy miafina tanteraka: ny Bhagavad Gita, ilay sarobidy indrindra amin'ny firavaka ao India. Voahangy tsy lafo vidy io India io. Ny fahamarinana nomen'i Krishna tamin'i Arjuna dia avo sy tsara tarehy ary maharitra mandrakizay. Saingy ny vanim-potoana lavitra indrindra izay nametrahana ilay tantara an-tsehatra, ary ireo foto-pinoana Vedic taloha izay anaronana sy nanarontsaronana ny fahamarinany, dia manahirana antsika tsy hahatakatra ny toetran'i Krishna sy i Arjuna; ny fifandraisan'izy ireo; inona ny biraon'ny tsirairay amin'ny hafa, ao amin'ny na ivelan'ny vatana. Ny fampianarana amin'ireto andalana hajaina ireto dia feno heviny ary mety misy lanjany lehibe. Saingy mifangaro be sy takona amin'ny teolojia arkeolojia sy ny fotopampianarana soratra masina izy io hany ka takona tanteraka ny maha-zava-dehibe azy, ary ny lanjanany tena izy dia ahena noho izany.
Noho ny tsy fahampian'ny fahazavana amin'ny filozofia atsinanana, ary ny fisehoan-javatra mifanohitra amin'ny tenany ho toy ny torolàlana amin'ny fahalalana ny tena ao amin'ny tena sy ny tena tena izy, ny fampianarana taloha momba an'i India dia toa mampiahiahy sy tsy azo ianteherana. . Miverina any Andrefana ny iray.
Momba ny Kristianisma: Tsy fantatra ny tena niandohan'ny tantaran'ny Kristianisma. Betsaka ny zavatra vita an-tsoratra efa an-taonany maro no nanazava ny fampianarana, na izay noeritreretiny voalohany. Hatramin'ny ambaratonga voalohany dia nisy fampianarana betsaka momba ny fotopampianarana; fa tsy misy asa soratana izay mampiseho fahalalana izay tena tanjona sy nampianarina tany am-piandohana.
Ireo fanoharana sy fitenenana ao amin'ny The Evanjely dia porofon'ny fahalehibeazana, fahatsorana ary fahamarinana. Na dia ireo izay nomena ilay hafatra vaovao voalohany aza dia toa tsy azony. Ny boky dia mivantana, tsy natao hamitahana; fa miaraka amin'izay dia milaza izy ireo fa misy dikany anatiny izay ho an'ny olom-boafidy; fampianarana miafina tsy natao ho an'ny rehetra fa ho an'ny "na iza na iza mino." Mazava ho azy fa feno zava-miafina ireo boky; ary tsy maintsy heverina fa mitafy fampianarana izay fantatry ny olom-bitsy voalohany izy ireo. Ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina: mistery ireo. Ny mistery koa dia ny fananahana tsy manan-tsiny sy ny fahaterahan'i Jesosy ary ny fiainany; toy izany koa ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny mistery, tsy isalasalana, dia ny lanitra sy ny helo ary ny devoly ary ny fanjakan'Andriamanitra; satria zara raha azo inoana fa ireo lohahevitra ireo dia natao ho azo amin'ny resaka sens fa tsy ho tandindona. Ankoatr'izay, manerana ny boky dia misy andian-teny sy teny izay mazava fa tsy raisina ara-bakiteny loatra, fa amin'ny heviny mistika; ary ny hafa mazava fa ny vondrona voafantina ihany no misy dikany. Ankoatr'izay, tsy mitombina ny fiheverana fa ny fanoharana sy ny fahagagana dia mety ho nifandray tamin'ny fahamarinana ara-bakiteny. Mistery manerana - fa na aiza na aiza no aharihary ny zava-miafina. Inona daholo izany mistery izany?
Ny tena tanjon'ny Evanjely dia ny mampianatra ny fahazoana sy fiainana fiainana anaty; fiainana anaty izay hamelona indray ny vatan'olombelona ary handresy ny fahafatesana, hamerina amin'ny laoniny ny vatana ara-nofo ho amin'ny fiainana mandrakizay, ilay fanjakana nolazaina fa nianjera - ny "fianjerany" dia "ota voalohany." Tamin'ny fotoana iray dia azo antoka fa tsy maintsy nisy ny rafitry ny torolàlana voafaritra izay hanazava tsara ny fomba mety hiainany fiainana anaty toy izany: ny fomba ahafahan'ny olona iray mamaky amin'ny fahalalana ny tena Tenanao. Ny fisian'ny fampianarana miafina toy izany dia voalaza ao amin'ireo asa soratra kristiana tany am-boalohany tamin'ny alàlan'ny firesahana ireo zava-miafina sy mistery. Ankoatr'izay dia toa miharihary fa fanoharana, fanoharana ireo fanoharana ireo: tantara an-trano sy sarin-kabary, fitaovam-pitaterana mba hampitana ohatra ara-moraly sy fampianarana etika fotsiny, fa koa fahamarinana ao anatiny sy mandrakizay ho ampahany amin'ny rafi-pampianarana azo antoka. Na izany aza, ny Evanjely, tahaka ny misy ankehitriny, dia tsy manana fifandraisana izay ilaina mba hamoronana rafitra iray; izay nidina tamintsika dia tsy ampy. Ary, momba ny zava-miafina izay nanafenana ireo fampianarana ireo dia tsy nisy fanalahidy na kaody fantatra nomena antsika hahafahantsika mamoha na manazava azy ireo.
Ny mpanambara farany sy azo antoka indrindra ny amin'ireo fotopampianarana voalohany fantatsika dia i Paul. Ny teny nampiasainy dia natao hampazava ny heviny amin'ireo izay nitenenan'izy ireo; fa ankehitriny ny asa sorany dia mila adika amin'ny andro ankehitriny. "Ny epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintiana," toko faha-XNUMX, dia miresaka sy mampahatsiahy fampianarana sasany; torolalana azo antoka momba ny fiainana fiainana anaty. Saingy heverina fa ireo fampianarana ireo na tsy nanolo-tena hanoratra - izay toa takatry ny saina - na raha tsy izany dia very na very tavela tamin'ny asa soratra nidina. Amin'ny hetsika rehetra dia tsy aseho ny "Làlana".
Nahoana ireo fahamarinana no nomena tamin'ny endrika mysteries? Ny antony dia mety hoe ny lalàn'ny vanim-potoana dia voarara ny fampielezana ny foto-pinoana vaovao. Ny famongorana fampianarana hafahafa na fotopampianarana hafahafa dia mety ho voasazy noho ny fahafatesana. Raha ny marina, ny tantara dia ny nahafatesan'i Jesoa tamin'ny alalan'ny fanomboana ny lakozia noho ny fampianarany ny fahamarinana sy ny fomba fiainana ary ny fiainana.
Saingy androany, hono, dia misy ny fahalalahana miteny: mety hambara tsy amin-tahotra ny fahafatesana izay inoan'ny olona momba ny zava-miafina eo amin'ny fiainana. Ny hevitry ny olon-drehetra na fantany momba ny lalàm-panorenana sy ny fiasan'ny vatan'olombelona ary ny olona mahatsiaro tena monina ao aminy, ny marina na ny hevitra mety hananan'ny olona iray momba ny fifandraisan'ny tena hita maso sy ny tena Tenany, ary ny amin'ny làlan'ny fahalalana- -ireo dia tsy mila miafina, ankehitriny, amin'ny teny miafina mitaky lakile na kaody iray ho an'ny fahalalany. Amin'ny vanim-potoana maoderina, ny "fambara" rehetra sy ny "jamba", ny "tsiambaratelo" rehetra ary ny "fanombohana" amin'ny fiteny miafina manokana dia tokony ho porofon'ny tsy fahalalana, ny fitiavan-tena, na ny fivarotan-tena.
Na dia eo aza ny hadisoana sy fisaratsarahana sy sektarisma; na dia maro karazana fandikana ny foto-pampianarana mystika aza, dia niely nanerana ny faritra rehetra ny kristianisma. Angamba mihoatra noho ny finoana hafa rehetra, ny fampianarany dia nanampy nanova izao tontolo izao. Tsy maintsy misy fahamarinana ao amin'ny fampianarana, na dia mety ho miafina aza izy ireo, izay, efa ho roa arivo taona lasa izay, dia efa tonga tao am-pon'ny olona ary namoha ny maha-olombelona azy ireo.
Ny fahamarinana mandrakizay dia manana ny maha-olombelona, ​​ao amin'ny maha-olombelona izay manontolo ny mpankafy rehetra ao amin'ny vatan'olombelona. Ireo fahamarinana ireo dia tsy azo tsinontsina na hadino tanteraka. Na firy taona, na inona na inona filozofia na finoana, dia hiseho sy hitsangana ny fahamarinana, na inona na inona fiovana niova.
Ny endrika iray anehoana ny sasany amin'ireo fahamarinana ireo dia ny Freemasonry. Ny filaharana Masonika dia efa antitra toy ny zanak'olombelona. Misy fampianarana sarobidy indrindra; lehibe lavitra, raha ny marina, noho ny ankasitrahan'ny Mason izay mpiambina azy ireo. Ilay baiko dia nitahiry fampahalalana tsy voavidim-bola taloha momba ny fananganana vatana maharitra mandrakizay ho an'izay tsy mety maty. Ny fampisehoana zava-miafina afovoany dia mikasika ny fananganana tempoly iray izay rava. Tena misy dikany izany. Ny tempoly dia tandindon'ny vatan'olombelona izay tsy maintsy aorin'ny olombelona, ​​averina indray, ho vatana nofo izay haharitra mandrakizay, mandrakizay; vatana iray izay ho fonenana mety ho an'izay manao tsy mety maty amin'izay. "Ny Teny" izay "very" no mpanao azy, very ao amin'ny vatan'olombelona - ny sisa amin'ny tempoly lehibe taloha; fa izay hahita ny tenany averina indray ny vatana ary ny mpanao azy no mifehy azy.
Ity boky ity dia mitondra Fahazavana bebe kokoa, fahazavana bebe kokoa amin'ny fisainanao; Hazavana hahitanao ny "Làlan-kalehanao" mandritra ny fiainana. Ny Mazava entiny, na izany aza, dia tsy fahazavan'ny natiora; Jiro vaovao io; vaovao, satria, na dia efa nisy niaraka taminao aza io dia tsy fantatrao. Ao amin'ireto pejy ireto dia antsoina hoe ny Conscious Light ao anatiny; io ilay hazavana afaka mampiseho anao zavatra toa azy ireo, ilay hazavan'ny fahiratan-tsaina izay ifandraisanao aminy. Noho ny fisian'io hazavana io no ahafahanao mieritreritra amin'ny famoronana eritreritra; eritreritra hamatotra anao amin'ny zavatra voajanahary, na hanafaka anao amin'ny zavatra voajanahary, araka ny safidinao sy tianao. Ny tena fisainana dia ny fihazonana sy fifantohana tsy tapaka an'ny hazavana ao anaty momba ny lohahevitry ny fisainana. Amin'ny fisainanao no mahatonga ny anjaranao. Ny fisainana marina no làlana ahazoana fahalalana amin'ny tenanao. Izay afaka manondro anao ny làlana, ary mety hitarika anao handeha, dia ny hazavan'ny faharanitan-tsaina, ny hazavana mahatsiaro tena ao anatiny. Ao amin'ny toko manaraka dia voalaza ny fomba tokony hampiasana io hazavana io mba hananany hazavana bebe kokoa.
Ny boky dia mampiseho fa zavatra tena izy, ny tena izy. Ny hany zavatra tena ilain'ny olona dia ny eritreriny. Ny boky dia maneho ny fizotry ny saina izay mamorona ny eritreritra; ary ny eritreritra maro dia maharitra kokoa noho ny vatany na ny atidoha izay namoronana azy ireo. Asehony fa ny eritreritry ny olona dia ny hery anaty, ireo printy manga, ny drafitra, ny modely izay anorenany ireo zavatra azo tsapain-tanana izay nanovàny ny endriky ny natiora, ary nanao izay antsoina hoe fomba fiainany sy fandrosoana. Ny hevitra dia ny hevitra na ny endrika amam-pahaizana ary ny fanorenana sy fananana ary fandringanana ny sivilizasiona. Ny boky dia manazava ny fomba fisainan'ny olona tsy hita maso amin'ny asa sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany manokana sy ny fiainany, ka mamorona ny anjarany amin'ny fiainana aorian'ny fiainana eto an-tany. Nefa mampiseho ihany koa ny fomba ahafahan'ny olona miezaka ny mieritreritra raha tsy mamorona hevitra, ary mifehy ny hoaviny.
Ny fomba fiteny izay ampiasaina matetika dia ny fehezan-teny mifandraika amin'ny zavatra rehetra izay natao hampiharina amin'ny fomba fisainana rehetra, tsy misy dikany. Amin'ny ankapobeny dia heverina fa manana saina iray ihany ny olona. Amin'izao fotoana izao dia misaina telo samihafa sy miavaka, izany hoe fomba fisainana amin'ny Light Conscious, dia ampiasain'ny mpanamboatra azy. Ireo, voalaza teo aloha, dia: ny saina, ny fahatsapana ary ny faniriana. Ny saina dia ny fiasan'ny zavatra manan-tsaina. Ny saina tsy miasa tsy miankina amin'ny mpankafy. Ny fiasan'ny tsirairay amin'ireo hevitra telo ireo dia miankina amin'ny fihetseham-po sy ny faniriana, ilay mpankafy.
Ny vatana dia izay matetika lazaina amin'ny saina, na ny saina. Izany dia ny fahatsapana fahatsapana sy faniriana toy ny rivotra amin'ny natiora ara-batana, toy ny mpandraharaha ao amin'ny milina fiasan'olombelona, ​​ary noho izany dia antsoina hoe ny vatana. Izy io no hany saina izay mifantoka sy manao fihetsika miaraka amin'ny sy ny eritreritra amin'ny vatana. Noho izany dia fitaovana amin'ny alalan'io no ahafantaran'ilay mpankatia sy mety hitranga ao anatiny sy amin'ny alalan'ny tontolo manodidina azy.
Ny fahatsapana sy ny fanirian-tsaina dia ny fiasan'ny fahatsapana sy ny faniriana tsy misy firy na mifandray amin'ny tontolo hita maso. Ireo saina roa ireo dia saika tototra tanteraka sy mifehy ary miankin-doha amin'ny vatana. Noho izany, ny fisainan'ny olombelona rehetra dia natao mba hifanaraka amin'ny fisainan'ny vatana, izay mampifandray ny mpankafy amin'ny natiora ary manakana ny fisainany amin'ny tenany ho zavatra miavaka amin'ny vatana.
Ny antsoina hoe psychology ankehitriny dia tsy siansa. Ny psikolojia ankehitriny dia voafaritra ho fianarana ny fitondrantenan'olombelona. Tokony horaisina izany hoe midika izany fa ny fandinihana ny fahatsapana avy amin'ny zavatra sy ny herin'ny natiora izay natao tamin'ny alalan'ny fahatsapana amin'ny rafitra nataon'olombelona, ​​sy ny valintenin'ny rafitra ataon'ny olombelona amin'ny fahatsapana voarainy. Saingy tsy psychologie izany.
Tsy misy karazana psikology toy ny siansa, raha tsy misy ny karazana fahatakarana momba ny psyche, ary ny atao hoe saina; ary ny fanatanterahana ny fomba fisainana, ny fomba fiasan'ny saina ary ny antony sy ny vokatry ny asany. Miaiky ny psychologists fa tsy fantany ireo zavatra ireo. Alohan'ny ahafahan'ny psikolojia ho lasa siansa marina, dia tsy maintsy mahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fisainan'ny sainy telo. Io no fototra izay ahafahana mamorona siansa tena marina momba ny saina sy ny fifandraisan'ny olombelona. Ao amin'ireto pejy ireto dia aseho ny fanirian'ny fihetseham-po sy ny faniriana mivantana amin'ny lahy sy vavy, ary manazava fa ao amin'ny olona iray ny fihetseham-po mahatsapa ny faniriana ary ao amin'ny vehivavy ny faniriana ny faniriana dia manjaka amin'ny fihetseham-po; ary ny olona tsirairay avy dia ny fiasan'ny vatana ankehitriny no manakaiky kokoa ny iray na ny iray amin'ireny, araka ny firaisana amin'ny vatana izay anaovany azy; Ary aseho koa, fa ny fifandraisan'ny olombelona rehetra dia miankina amin'ny fiasan'ny vatana ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fifandraisan'izy samy izy.
Ny psikology maoderina dia aleony tsy mampiasa ny teny hoe fanahy, na dia efa nampiasaina tamin'ny teny anglisy nandritra ny taonjato maro aza izy io. Ny anton'izany dia satria ny zavatra rehetra voalaza momba ny fanahy na ny zavatra ataony, na ny antony anompoany azy, dia tsy mazava loatra, be fisalasalana ary misafotofoto, hanomezana antoka ny fandalinana siantifika ny lohahevitra. Fa kosa, ny psikology dia naka ny lohahevitry ny fandinihana ny masinin'olombelona sy ny fitondran-tenany. Fantatra hatry ny ela sy eken'ny olona amin'ny ankapobeny, na izany aza, ny olona dia voaforon'ny "vatana, fanahy ary fanahy." Tsy misy olona misalasala fa zavamananaina ny vatana; fa ny fanahy sy ny fanahy kosa dia tsy azo antoka sy be vinavina. Amin'ireto lohahevitra lehibe ireto dia mazava ity boky ity.
Mampiseho ilay boky fa ny fanahy velona dia zava-misy marina sy ara-bakiteny. Mampiseho izy io fa ny tanjony sy ny fiasany dia manan-danja lehibe amin'ny drafitra manerantany, ary tsy mety simba izany. Nohazavaina fa izay nantsoina hoe fanahy dia singa natiora - singa iray, singa iray misy singa iray; ary ity entona mahatsiaro tena nefa tsy manam-pahaizana ity no mandroso lavitra indrindra amin'ny singa voajanahary rehetra amin'ny fanaingoana ny vatana: io no singa singa lehibe indrindra ao amin'ny fikambanan'ny vatana, rehefa nandroso tamin'io asany io taorian'ny fotoana nahaizany mpianatra tao amin'ireo asa kely tsy dia lehibe loatra. ahitana ny natiora. Noho izany dia ny isan'ny lalàna mifehy ny natiora rehetra, ity singa ity dia mahafeno fepetra ho mpitantana ankapobeny ny natiora voajanahary ao amin'ny rafitra vatan'olombelona; toy izany no anompoany ny mpanao tsy mety maty amin'ny alàlan'ny fisiany rehetra amin'ny alàlan'ny fananganana vatana nofo vaovao ho an'ny mpanao azy, ary ny fikojakojana sy ny fanamboarana izany vatana izany raha mbola mitaky ny ho avin'ny mpanao azy, araka ny notondroin'ny mpanao azy. fomba fisainany.
Ity singa ity dia antsoina hoe fofona endrika. Ny endriky ny asan'ny fofona dia ny rivotra; Ny fofon'aina dia ny fiainana, ny fanahy, ny vatana; Manasaraka ny rafitra manontolo izy io. Ny endrika hafa amin'ny endrika fofon'aina, ny endrik'ilay pasipaoro, dia endrika na modely, ny lamina, ny bobongolo, izay ny rafitra ara-batana dia miorina amin'ny fisehoan-javatra hita maso sy azo tsapain-tanana amin'ny fihetsiky ny fofona. Ny lafiny roa amin'ny endrika fofon'aina dia maneho ny fiainana sy ny endriny, izay misy ny rafitra.
Noho izany, ny filazana fa ny olona dia mifototra amin'ny vatana, ny fanahy ary ny fanahy dia mora takarina ka ny dikan'ny hoe vatana dia mifototra amin'ny vola miditra; fa ny fanahy no aina ao amin'ny vatana, ny fofona velona, ​​ny fofon'aina; ary ny fanahy no endrika anaty, ny modely tsy mety simba, ny rafitra hita maso; ary noho izany dia ny fanahy velona no endrika fanehoana mandrakizay izay mamolavola, manamboatra, manamboatra ary manorina indray ny vatana ara-nofo.
Ny endriky ny fofon'aina, ao anatin'ny fe-potoana sasany amin'ny asa aman-draharahany, dia ahitana ny psikology izay nantsoina hoe saina tsy fantatra, sy ny tsy fahatsiarovan-tena. Mitantana ny rafi-pitabataban'ny tsy misaina izy io. Ao amin'io asa io dia miasa araka ny fahatsapana azony avy amin'ny natiora izany. Manatanteraka ny fihetsiketsehana an-tsitrapo ao amin'ny vatana koa izy, araka ny fepetra noraisin'ny mpitsabo. Noho izany, dia toy ny andiam-bolo eo amin'ny natiora sy ny vahiny tsy mety maty ao amin'ny vatana; Ny automatique dia manonofy mivantana ny fiantraikan'ny zavatra sy ny herin'ny natiora, ary ny fisainan'ny mpanao asa tanana.
Ny vatanao dia vokatry ny fisainanao. Na inona na inona asehony amin'ny fahasalamana na aretina, dia ataonao amin'ny fisainanao sy ny fahatsapanao ary ny fanirianao izany. Ny tenan'ny nofonao ankehitriny dia tena fanehoana ny fanahinao tsy mety simba, ny fofon'ainao; izany dia exteriorization ny eritreritry ny androm-piainana maro. Izy io dia rakitsoratra hita maso ny fisainanao sy ny zavatra ataonao amin'ny maha mpankato anao, mandraka ankehitriny. Amin'ity zava-misy ity dia mipoitra ny tsimok'aretin'ny fahalavorariana sy ny tsy fahafatesan'ny vatana.
Tsy misy zavatra hafahafa loatra amin'izao andro izao amin'ny hevitra fa ny olombelona indray andro any dia hahatratra ny tsy fahafatesana mandrakizay. fa izy dia hiverina indray ny toetry ny fahalavorariana izay nianjerany voalohany. Ny fampianarana toy izany amin'ny endrika samihafa dia mitoetra ankehitriny any Andrefana efa ho roa arivo taona. Nandritra io fotoana io dia niparitaka erak'izao tontolo izao izy ireo ka olona an-jatony tapitrisa, izay efa niaina teto an-tany nandritra ny taonjato maro, dia nentina nankamin'ny fifandraisana tsy tapaka niaraka tamin'ny hevitra ho toy ny fahamarinana noraisina anaty. Na dia mbola kely aza ny fahatakarana izany, ary mbola tsy mieritreritra azy io; na dia voasakantsakana aza izy mba hamenoana ny fahatsapana sy ny fanirian'ny olona samihafa; Ary na dia mety ho hitan'ny maro ankehitriny aza ny tsy firaharahiana, ny fahatsapana na ny tahotra amam-pihetseham-po, ny hevitra dia ampahany amin'ny fomba fijery ankapobeny amin'ny andron'ny olombelona amin'izao fotoana izao, ary mendrika ny mandinika tsara.
Ny fanambaràna sasany ao amin'ity boky ity anefa dia mety ho hafahafa, na dia mampihetsi-po aza, mandra-pahazoan-dry zareo hevitra. Ohatra: ny hevitra hoe ny vatan'ny olombelona dia mety ho tsy mety lo, mandrakizay; dia azo havaozina indray sy haverina amin'ny toetry ny fahalavorariana sy ny fiainana mandrakizay izay nanoloran'ny mpankahala azy hatry ny ela. Ary koa, ny hevitra hoe ny toetry ny fahalavorariana sy ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy aorina, fa tsy aorian'ny fahafatesana, fa tsy any amin'ny lavitra lavitra any aoriana, fa ao amin'ny tontolo ara-batana raha mbola velona kosa izy. Mety ho toa hafahafa tokoa izany, nefa rehefa heverina tsara dia tsy hisalasalana izy io.
Ny tsy fitoviana dia ny fahafatesan'ny vatan'ny olombelona; Mbola tsy misaina ihany ny fampisehoana fa ny fahafatesana ihany no afaka hiaina mandrakizay. Efa ela ny mpahay siansa no nilaza fa tsy misy antony mahatonga ny fiainan'ny vatana tsy hivoatra mandritra ny fotoana tsy voafetra, na dia tsy manoro hevitra aza izy ireo hoe ahoana no hahatanteraka izany. Mazava ho azy, ny fahafatesan'ny olona dia efa maty foana; saingy maty izy ireo satria tsy nisy ezaka ezaka natao hanarenana azy ireo. Ao amin'ity boky ity, ao amin'ny toko The Great Way, dia voalaza fa ny fomba mety hamerenana indray ny vatana dia afaka averina amin'ny toetry ny fahalavorariana ary ho lasa tempoly ho an'ny Triune Self tanteraka.
Ny herin'ny firaisana dia zava-miafina iray hafa izay tsy maintsy vahan'ny olona. Tokony ho fitahiana izany. Fa kosa, ny olona matetika dia manao azy ho fahavalony, ny devoliny, izay miaraka aminy mandrakariva ary tsy afa-mandositra izy. Ity boky ity dia mampiseho ny fomba hampiasana azy io ho hery lehibe hanasoavana azy araka ny tokony ho izy; ary amin'ny alàlan'ny fahatakarana sy fifehezan-tena mamelombelona ny vatana ary mahatratra ny tanjon'ny tena sy ny idealy amin'ny fahombiazana mandroso hatrany.
Ny olombelona rehetra dia zava-miafina roa sosona: ny misterin'ny tenany ary ny misterin'ny vatana misy azy. Izy no manana sy ny lakile ary lakilen'ny miafina roa sosona. Ny vatana no hidin-trano, ary izy no lakilen'ny hidin-trano. Ny tanjon'ity boky ity dia ny hilaza aminao ny fomba hahafantaranao ny tenanao ho lakilen'ny mistery anao; ny fomba hahitana ny tenanao ao amin'ny vatana; ny fomba hahitana sy hahalalana ny tena Tenanao ho fahalalana ny tena; ny fomba fampiasana ny tenanao ho lakilen'ny fanokafana ny hidin-trano izay ny vatanao; ary, amin'ny alàlan'ny vatanao, ny fomba hahatakarana sy hahafantarana ireo zava-miafina natiora. Ao anaty ianao, ary ianao no mpandraharaha, ny masinina natiora an'ny natiora; miasa sy mifandray amin'ny ary mifandraika amin'ny natiora. Rehefa mamaha ny tsiambaratelon'ny tenanao ianao amin'ny maha-mpanatanteraka ny fahalalanao tena sy mpampikotrana ny masininao, dia ho fantatrao - amin'ny antsipiriany sy ny fitambarany - fa ny asan'ny singa ao amin'ny vatanao dia lalàna voajanahary. Ho fantatrao avy eo ny lalàna fantatra momba ny natiora, ary afaka hiasa mifanaraka amin'ny masinina natiora lehibe amin'ny alàlan'ny masinina tsirairay misy anao.
Mystery is another. Ny fotoana dia misy foana amin'ny lohahevitra mahazatra amin'ny resaka; Nefa raha misy manandrana mieritreritra izany ary milaza izay tena izy, dia nanjary nanjavona, tsy mahazatra; Tsy azo atao izy, tsy mahatratra ny tanjona; Miala tsiny, mandositra, ary mihoatra ny iray. Tsy misy fanazavana izany.
Ny fotoana dia ny fiovan'ny singa, na ny vondron'olona marobe, amin'ny fifandraisany. Io famaritana tsotra io dia mihatra hatraiza hatraiza sy ambanin'ny fanjakana sy ny toe-piainana rehetra, saingy tsy maintsy eritreretina sy ampiharina vao mahatakatra azy ny olona. Ny mpanao dia tsy maintsy mahatakatra ny fotoana mandritra ny vatana, mifoha. Toa hafa ny fotoana any amin'ny tontolo sy fanjakana hafa. Raha ny fahatsiarovan-tenan'ny mpanao azy dia toa tsy mitovy izy rehefa mifoha toy ny amin'ny nofy, na rehefa matory lalina, na rehefa maty ny vatana, na rehefa mamakivaky ny fanjakana aorian'ny fahafatesana, na eo am-piandrasana ny fananganana sy ny fahaterahan'ny ilay vatana vaovao holovany eto an-tany. Ny tsirairay amin'ireto fe-potoana ireto dia samy manana ny "Tamin'ny voalohany" nifandimby ary nifarana. Ny fotoana dia toa mandady amin'ny fahazazana, mihazakazaka amin'ny fahatanorana ary mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha tsy mitsaha-mitombo mandra-pahafatin'ny vatana.
Ny fotoana dia tranokalan'ny fanovana, voarary hatramin'ny mandrakizay ka hatramin'ny vatan'olombelona miova. Ny kofehy izay tenona ny tranokala dia ny endrika mifoka rivotra. Ny body-mind dia mpanamboatra sy mpampandeha ny tenona, mpivezivezy amin'ny tranonkala, ary mpanenona ny voaly antsoina hoe "lasa" na "ankehitriny" na "ho avy". Ny fisainana dia mahatonga ny fotoana fohy, ny fisainana dia mampiroborobo ny fotoana, ny fisainana dia manenona ny voan'ny fotoana; ary ny saina-vatana no mieritreritra.
Ny CONSCIOUSNESS dia mistery iray hafa, ny zava-miafina lehibe indrindra sy lalina indrindra. Ny teny hoe fahatsiarovan-tena dia tokana; teny anglisy namboarina izy io; ny mitovy aminy dia tsy miseho amin'ny fiteny hafa. Ny soatoavina sy ny dikany manan-danja indrindra dia tsy ankasitrahana. Izany dia ho hita amin'ny fampiasana ireo teny ireo izay natao hanompoana. Manome ohatra vitsivitsy mahazatra momba ny fampiasana diso azy: re izany amin'ny fomba fiteny toy ny "fahatsiarovako" ary "fahatsiarovan'ny tena"; ary toy ny fahatsiarovan-tena biby, fahatsiarovan-tenan'ny olombelona, ​​ara-batana, ara-tsaina, cosmika ary karazana fahatsiarovan-tena hafa. Ary faritana ho fahatsiarovan-tena ara-dalàna, ary lehibe sy lalina kokoa, ary avo sy ambany, anatiny sy ivelany, fahatsiarovan-tena; ary ny fahatsiarovan-tena feno sy ampahany. Re koa ny momba ny fanombohan'ny fahatsiarovan-tena sy ny fiovan'ny fahatsiarovan-tena. Ny iray mandre ny olona nilaza fa efa niaina na niteraka fitomboana, na fanitarana, na fanitarana, ny fahatsiarovan-tena. Ny fampiasana diso matetika ny teny dia amin'ny fehezanteny toy ny hoe: tsy mahatsiaro tena, mitana tsy mahatsiaro tena; mamerina, mampiasa, mampivelatra ny fahatsiarovan-tena. Ary ny iray mandre, lavitra, ny fanjakana isan-karazany, sy ny fiaramanidina, ary ny diplaoma ary ny toetry ny fahatsiarovan-tena. Ny fahatsiarovan-tena dia lehibe loatra ka tsy mendrika, voafetra, na voatendry. Ho fiheverana an'ity zava-misy ity, ity boky ity dia mampiasa ny andian-teny hoe: mahatsiaro, na toy, na miditra. Manazava: na inona na inona ny fahatsiarovan-tena dia mahatsapa zavatra sasany, na hoe inona izany, na mahatsiaro tena amin'ny zavatra iray. diplaoman'ny fahatsiarovan-tena.
Ny fahatsiarovan-tena no tena farany, ny tena zava-misy marina. Ny fahatsiarovan-tena dia amin'ny fisian'ny zava-mitranga rehetra. Mystery of all mysteries, beyond comprehension. Raha tsy misy izany dia tsy misy na inona na inona azo atao; tsy misy afaka mieritreritra; Tsy misy, tsy misy, tsy misy hery, tsy misy tarika, afaka manatanteraka asa. Na izany aza, ny fahatsiarovan-tena dia tsy manatanteraka asa: tsy manao na inona na inona izy; Izany dia fisehoan-javatra, na aiza na aiza. Ary noho ny fanatrehany fa ny zava-drehetra dia mahatsiaro na aiza na aiza alehany. Tsy antony ny fahatsiarovan-tena. Tsy azo angonina na ampiasaina na tsy misy fiantraikany amin'ny zava-drehetra izany. Ny fahatsiarovan-tena dia tsy vokatry ny zavatra, na miankina amin'ny zava-drehetra. Tsy mitombo na mihena, manitatra, manitatra, mifandanja, na miova; na miovaova amin'ny fomba rehetra. Na dia misy aza ny ambaratongam-pahefana dia tsy misy ny fahatsiarovan-tena: tsy misy fiaramanidina, tsy misy fanjakana; tsy misy mari-pahaizana, fizarazarana, na fiovana isan-karazany; Toy izany koa na aiza na aiza, ary amin'ny zava-drehetra, avy amin'ny sokajin'ny natiora ho an'ny Supreme Intelligence. Ny fahatsiarovan-tena tsy manana toetra, tsy misy toetra, tsy misy toetra; tsy manana izany izy; Tsy azo atao izany. Tsy manomboka ny fahatsiarovan-tena; Tsy afaka hitsahatra izany. Ny fahatsiarovan-tena.
Amin'ny fiainanao rehetra eto an-tany dia efa nitady tsy an-kijanona ianao, manantena na mitady olona na zavatra tsy hita. Mahatsapa ianao fa raha mahita ny zavatra irinao dia ho afa-po sy afa-po ianao. Ny fahatsiarovan-tena efa antitra momba ny taona dia mihombo; izy ireo no fihetseham-po ankehitriny tamin'ny lasa hadinonao; izy ireo dia manery ny fahamendrehan'izao tontolo izao miverimberina noho ny fitomboan'ny traikefa mihatra ary ny fahabangana sy zava-poana amin'ny ezak'olombelona. Mety nikatsaka ny hanome fahafaham-po izany fahatsapana izany ianao tamin'ny fianakaviana, tamin'ny fanambadiana, tamin'ny zanaka, teo amin'ny namana; na, amin'ny asa aman-draharaha, harena, traikefa nahafinaritra, fahitana, voninahitra, fahefana ary fahefana - na amin'ny tsiambaratelo hafa tsy takatry ny fonao. Saingy tsy misy ny fahatsapana afaka manome fahafaham-po izany faniriana izany. Ny antony dia very ianao - ampahany very nefa tsy azo sarahina amin'ny Triune Self tsy mety maty. Tamin'ny taon-dasa lasa izay, ianao, toy ny fahatsapana-sy-faniriana, ilay mpandray anjara, dia namela ny ampahany ho an'ny mpandinika sy ny fahalalana ao amin'ny Triune Self anao. Ka very tamin'ny tenanao ianao satria, raha tsy misy fahatakarana ny momba ny Telozoroanao dia tsy azonao ny tenanao, ny hetahetanao ary ny maha very anao. Noho izany dia nahatsiaro ho manirery ianao indraindray. Hadinonao ny ampahany betsaka nataonao matetika teto amin'ity izao tontolo izao ity, amin'ny maha-olona anao; ary hadinonao ihany koa ny tena hatsarana sy ny hery izay tsapanao fa niaraka tamin'ny mpandinika anao sy ny fahalalanao azy amin'ny tontolon'ny faharetana. Fa ianao kosa, amin'ny maha-mpanao anao, dia maniry mafy ny fampitambarana ny fahatsapanao-sy ny fanirianao amin'ny vatana lavorary, mba ho eo akaikin'ny faritra misaina sy hahalalanao azy ianao, amin'ny maha Triune Self anao, ao amin'ny tontolon'ny faharetana. Ao amin'ireo asa soratra taloha dia nisy fiheverana momba izany fialana izany, amin'ny andian-teny toy ny "ny fahotana tany am-boalohany," "ny fahalavoan'olombelona," toy ny avy amin'ny fanjakana sy fanjakana izay mahafa-po ny olona iray. Izany fanjakana sy fanjakana niainganao izany dia tsy afaka mitsahatra; afaka mamerina izany amin'ny velona izy fa tsy aorian'ny fahafatesan'ny maty.
Tsy mila mahatsiaro irery ianao. Ny mpandinika sy ny mpampiasa anao dia miaraka aminao. Any an-dranomasina na any anaty ala, eny an-tendrombohitra na eny amin'ny lemaka, amin'ny tara-masoandro na aloka, any amin'ny vahoaka na any am-paradisa; na aiza na aiza misy anao, ny fisainanao sy ny fahafantarana ny Tenanao dia miaraka aminao. Ny tena fiainanao dia hiaro anao, raha toa ianao ka mamela ny tenanao hiaro anao. Ny mpandinika sy ny mpampiasa anao dia vonona amin'ny fiverenanao, na dia ela aza dia mety hitondra anao hitady sy hanaraka ny lalana ary hiverina amin'ny farany miaraka amin'ny fianakaviany miaraka aminy ho toy ny Triune Self.
Mandritra izany fotoana izany dia tsy ho anao izany, tsy afaka ny ho afa-po ianao, mahafa-po amin'ny zavatra tsy dia fahita firy. Ianao, amin'ny fahatsapana sy faniriana, no tompon'andraikitra amin'ny an'ny Triune Self; Ary avy amin'ny zavatra nataonao ho anao ho toy ny anjaranao dia tsy maintsy ianaranao ireo lesona roa lehibe izay ampianarina ny traikefa rehetra momba ny fiainana. Ireto lesona ireto dia:
Izay tsy tokony hatao.
Azonao atao ny mametraka ireo lesona ireo mandritra ny fiainana maro araka izay itiavanao azy, na mianatra azy ireo raha vantany vao tianao izany - izany no manapa-kevitrao; fa rehefa mandeha ny fotoana dia ho fantatrao ireo.
Fisainana sy faniriana ➔
Ny mpanoratra ➔